Shulman Rogers: $33 Milyan ayaan kusoo celinay gacanta xubnaha sharciga ah ee Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa dhawaan faafisay war ku saabsan warbixin aan weli si rasmi ah u soo bixin oo Kormeerayaasha Qaramada Midoobay ee Cuna qabateyn hubka ee Somalia iyo Eretria, ay ka diyaariyeen Somalia.
Warbixintaas ayaa ku eedeysay madaxweynaha Somalia, Xassan Sheekh Maxamud iyo Wasiirkii hore ee Arimaha Dibadda, Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aaden inay doonayeen inay si musuq maasuq uu ku jiro ay u soo ceshadaan hantida dowladii hore ee Somalia.
Sidoo kale, warbixinta ayaa ku eedeysay shirkadda Mareykanka ah ee Shulman Rogers iney ka qeyb qaadatay sidii hantidii hore ee Soomaaliya ay mas’uuliyiinta dowladda Soomaaliya ugu qaadan lahaayeen si sharci darro ah.
Hadaba shirkadda Shulman Rogers ayaa xalay shir jaraa’id ku qabatay Minneapolis ee gobolka Minnesota, waxeyna ka ka hadashay sida wax u dhaceen iyo iska fidaacay eedii ugu timid Kooxda ka socotay Qaramada Midoobay ee (UN Monitoring Group).
Jeremy Shulman oo ka tirsan madaxda shirikadda Shulman Rogers oo la hadlay VOA ayaa wax lagu qursado ku tilmaamay warbixinta Kormeerayaasha dabagalka hubka Somalia iyo Eretria.
“Ma jiraan cadeymo uu guddiga dabagalka Qaramada Midoobay soo bandhigay, waxaana u maleynayaa in shaqadooda iyo tabahoodu yihiin mid la quursado” ayuu yiri Jeremy Shulman oo la hadlay VOA, Somali.
Jeremy Shulman ayaa been abuur ku tilmaamay eedeynta kooxdaasi u jeediyeen madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiirkii hore ee arrimaha debadda Fowsiya Yuusuf Xaaji Aadan, wuxuuna yiri “Eedeymaha loo jeediyey madadaxweynaha, wasiirkii hore ee arrimaha debadda, shirkadeyda iyo dhamaan dadka kale ee ku lugta leh arrintaan waa been, waana wax la dhibsado oo aflagaado ah”.
Sarkaalkan ka tirsan shirkadda Jeremy Shulman ayaa sheeay iney sharciga la korayaan ninka madaxda u ah kooxda diyaarisay warbixintaas.
“Sidii aan shirka jaraa’id ku cadeey tilaabo dhinaca sharciga ah ayaa xilligaan la diyaarinayaa Mr. Chabra iyo tabihiisa, laakiinse arrinta sheegeysa in hanti Soomaaliyeed loo leexiyey meel ka baxsan bankiga dhexe ee Soomaaliya ama dad gaar ah la siiyey waa been si la mid ah sidii Mr. Chabra sanadkii hore sameeyey, taasoo uu bangiga dhexe ku sheegay sanduuq loo adeegsado in si isdabamarin dhinaca siyaasadda ah lagu sameeyo” ayuu sidoo kale yiri Jeremy Shulman.
Jeremy Shulman oo la weydiiyey kaalinta shirkadiidu ku leedahay howlaha dib u soo celinta hantida Soomaaliya ayaa ku jawaabay “Kaalinteenu waa inagoo ah shirkad dhinaca Qaanuunka oo ay la macaamileen xukuumadihii is xigxigay ee Soomaaliya, tan kaliya maahee weliba kuwii hore si ay hormuud uga noqoto, u ogaato, u dabagasho, u ilaaliso, una soo celiso hantidii hore ee Soomaaliya, waa arrin socota oo ay caqabado badan horyaallaan”.
Shirkadda Shulman Rogers ayaa sheegtay in ilaa hadda ay ku guuleystay iney dib usoo celiso hanta gaareysa $33 Milyan oo dollar, taasoo sida shirkaddu tiri gacanta loo geliyey madaxda sharciga ah ee dowladda Soomaaliya.
“Ilaa iyo hadda si weyn ayaan u guuleysanay oo waxaan soo celinay hanti gaareysa ilaa $33 Milyan oo dollar, hantidaas waxaa si haboon loogu wareejiy xubnaha sharciga ee dowladda Soomaaliya” Jeremy Shulman ayaa sidaa yiri.
Jeremy Shulman ayaa sheegay in aqoonsiga Mareykanku siiyey dowladda Xasan Sheekh uu sahlay in lasoo celi karo hanitidii Soomaaliya, wuxuuna yiri “Maadaama ay dowladdu heleyso aqoonsi caalami ah iyo sharciyad laga soo bilaabo dhamaadkii sanadkii 2012 iyo 2013 markii ay dowladani xilka qabatay dedaalada hanta soo celintu waxey noqonayaan kuwa fudud, weli waxaa jira caqbad, laakiin markii tusaale ahaan dowladda Mareykanku aqoonsatay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud waxey arrintaas xoojisay dedaallada soo celinta hantida, waxaan filayaa iney sii xoogeysto bilaha soo socda”.
Madaxda dowladda Soomaaliya ayaa u beeniyey eedeynta uga timid Kormeerayaasha Qaramada Midoobay, hase ahaatee dowladda Soomaaliya ma sheegin halka ay ka baxday lacagta $33-da Milyan ah ee shirkadda Shulman Rogers sheegtay iney usoo celisay Soomaaliya.